Ny momba an'Ialy Rakotoniaina | Hevitra MPANOHARIANA
Ny momba an'Ialy Rakotoniaina
2007-07-03 @ 08:17 in Politika
Ho an’izay tsy mahalala dia izy no vadin’Atoa Pety Rakotoniaina izay karohin’ny mpitondra fanjakana amin’izao fotoana izao. Ataoko fa efa renareo hoe nohidian’ny mpitondra any amponja io ramatoa io amin’izao fotoana izao. Ampangaina ho miray tsikombakomba tamin’ireo nandoro ny Amphi ao Andrainjato ao Fianarantsoa izy. Ataoko, araka ny hevitro manokana, fa fomba entina hitazonana azy fotsiny izay iampangana azy amin’izao fotoana izao. Hafa ny zavatra tian-ko tratrarina dia ny hanoloran’Atoa Pety Rakotoniaina tena any amin’ny manam-pahefana.
Mety hitroatra avy hatrany isika amin’ny fandrenesana izay nambarako izay sy avy amin’ny tsoa-kevitra fa karazana takalon’aina izany ramatoa amin’izao fotoana izao. Dia mety ho tonga amin’ny filazana fa mihoa-pahefana ny fitondrana amin’izao fotoana izao amin’izany fihetsika izany. Tsy hitsara avy hatrany ny zava-misy amin’izao fotoana izao aho fa te-hilaza fotsiny hoe efa fanaon’ny mpitandro ny filaminana eto an-toerana efa fotoana lava io tranga io fa izay vao nihatra tamina mpanao politika na olona fanta-bahoaka.
Indray mandeha aho nanao zavatra tamina kaomisaria iray teto Antananarivo. Fotoana mialoha indrindra ny taona 2000 ity tranga tantaraiko ity. Nisy olona nampanantsoin’ny polisy indrindra tamin’ny fotoana nandehanako tao fa tsy ilay olona no tonga tao. Ny vadiny sy ny reniny no tonga tao. Niteny mafy (maharary!) ihany ilay nandray ireo olona ireo ka nanao hoe: rehefa tsy tonga izany izy dia tsy maintsy mijanona ny iray aminareo mandra-pahatongany. Tsy nahalala izay tohiny intsony aho satria efa vita ny taratasy nataoko tao. Averiko indray fa fitantarana fotsiny no ataoko etoana fa tsy milaza ny amin’ny fanajana ny Zon’olombelona sy ny karazany aho eto.
Manoratra ihany rehefa manana fahafahana e!
Tsy volamena hatrany izay mangina
> Manoratra ihany rehefa manana fahafahana e!
Misaotra amin'ny fampitam-baovao mitantara izay zava-misy :) fa tsy isan'ireo misafidy ny hitampim-bava na dia mahalala ny marina aza.
Nampidirin'i tomavana @ 09:33, 2007-07-03 [Valio]
Zavatra mpitranga tokoa io hitanao tany @ kaomisaria io, izay mifanohitra amin'ny zon'olombelona.
Fa momba ilay vadin'Atoa Pety dia aleoko tsy miandany amin'ny atsy na ny aroa. satria tsy manana porofo aho.
Nampidirin'i Tokinao @ 16:03, 2007-07-03 [Valio]